Dr. Tint Swe's Writings: Flooding and communicable diseases ရေကြီးခြင်းနဲ့ ကျန်းမာရေး
Flooding and communicable diseases ရေကြီးခြင်းနဲ့ ကျန်းမာရေး
ဝါဆို ဝါခေါင် ရေဖေါင်ဖေါင်
ရေကြီးနေတဲ့သတင်းတွေ မုံရွာကလာတယ်။ မုံရွာမှာမြစ်ရေတက်နေရင် ချင်းတွင်းအထွက်ပိုင်းက အရင်ဖြစ်တာသိတယ်။ ချင်းတွင်းမြစ်မှာဖြစ်ရင် တခြားမြစ်တွေလည်း ရေကြီးနိုင်တယ်။ ရေကြီး၊ ရေလွှမ်းရင် သတိထားရမယ့် ကူးစက်ရောဂါတွေ ရှိတယ်။ ဒီစာကို ၂၂-၇-၂ဝ၁၅ နေ့ကတည်းက ရေးထားပါတယ်။
၁။ ရေကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါတွေ = တိုက်ဖွိုက်ရောဂါ၊ ကာလဝမ်းရောဂါ၊ လက်ပတိုစပိုင်ရိုးဆစ်ရောဂါ၊ အသည်းရောင်အေရောဂါ) တွေကူးစက်နိုင်တယ်။
၂။ ကြားခံအကောင်တွေကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါတွေ = ငှက်ဖျားရောဂါ၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ၊ အသားဝါအဖျားရောဂါ၊ အနောက်နိုင်းလ်မြစ်ရောဂါ) တွေကူးစက်နိုင်တယ်။
Waterborne Diseases ရေကတဆင့်ကူးစက်သည့်ရောဂါများ
အစာကတဆင့် ကူးစက်သည့် ရောဂါများအုပ်စုမှာ ပါဝင်တယ်။ ရောဂါရစေတဲ့ပိုးမွှားများ၊ အဆိပ်အတောက်များ၊ လူနှင့်မသင့်သော ဓါတ်ပစ္စည်းများပါဝင်နေတဲ့ မသန့်ရှင်းတဲ့ရေကို သောက်သုံးမိပြီး ရစေတေဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေဖြစ်တယ်။ အစာကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေ အများဆုံး ဖြစ်စေတဲ့ပိုးတွေနဲ့ ကွဲပြားတယ်။ ယူအက်စ် ကူးစက်ရောဂါများ ထိန်းချုပ်ရေးဌာနရဲ့ ၁၉၇၂-၂ဝဝဝ စာရင်းအရ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။
• Giardia lamblia 35.8%
• Shigella spp. 11.4%
• Hepatitis A 6.3%
• Noroviruses 5.7%
• Campylobacter jejuni 4.5%
• Cryptosporidium 4.2%
• Samonella, nontyphoidal 3.9%
• Escherichia coli O157-H7 2.4%
• Salmonella Typhi 1.3%
• Vibrio cholerae 0.6%
• Enterotoxigenic Escherichia coli 0.3%
• Yersinia enterocolitica 0.3%
• Rotavirus 0.3%
• Entamoeba histolytica 0.3%
• Plesiomonas shigelloides 0.3%
• Small round virus 0.3%
• Miscellaneous chemicals 0.3%
Vector-borne Diseases ပိုးမွှားကောင်လေးများကတဆင့် ကူးစက်သည့်ရောဂါများ
လူနဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကို အင်းဆက်ပိုးမွှားကောင်လေးတွေကတဆင့် ကူးစက်စေတဲ့ရောဂါတွေကို ခေါ်တယ်။ အင်းဆက်ပိုး အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။ ခြင်၊ မှက်၊ ယင်၊ သန်း စသည်တို့ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအင်းဆက်တွေက ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဗက်တီးရီးယား၊ ရီကက်ဆီယေး အကောင်တွေကနေ သယ်ဆောင်ပြီး အကိုက်ခံရတဲ့ လူနဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကို ရောဂါရစေတယ်။ ငှက်ဖျား၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေး၊ ပလိပ်၊ ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ၊ တိုက်ဖတ်စ်၊ ရဲလိုးဖီဗာ စသည်တို့ ပါဝင်တယ်။
- Chikungunya ခြင်ကတဆင့်ကူးစက်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတမျိုး၊ ဆင်ဖြူတော် တုပ်ကွေးလို့ခေါ်မယ်။
- Dengue fever သွေးလွန်တုပါကွေးရောဂါ၊
- Eastern Equine Encephalitis (EEE) ခြင်ကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတမျိုး၊
- Epidemic polyarthritis ကပ်ရောဂါဖြစ်တဲ့ အဆစ်နာရောဂါတမျိုး၊
- Japanese encephalitis စပါးခင်းခြင်က တဆင့်ကူးစက်တဲ့ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ၊
- Kyasanur Forest disease ကနာတာကာရှိ သစ်တောရှိမျောက်များကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါ၊
- La Crosse encephalitis လာ-ခရော့စ် ဦးနှောက်ရောင် ခြင်ကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ၊
- Leishmaniasis သဲခြင်မကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ အရေပြား အနာရောဂါ၊
- Loaiasis သရက်ပိုးကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါ၊
- Lyme disease သမင်ခြင်ကောင်ကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါ၊
- Malaria ငှက်ဖျား၊ ခြင်ကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါ၊
- Onchocerciasis ခြင်နက်ကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ မျက်စိရောဂါ၊
- Plague ကြွက်သန်းကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ ကပ်ရောဂါကြီး၊
- Relapsing Fever သန်း၊ မှက် ကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါ၊
- St. Louis encephalitis ခြင်ကတဆင့် ကူးစက်တဲ့ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်နှင့်ဆင်တဲ့ ရောဂါ၊
- Venezuelan equine encephalitis ခြင်ကတဆင့်ကူးစက်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါတမျိုး၊
- West Nile fever ခြင်ကတဆင့်ကူးစက်တဲ့ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်နှင့်ဆင်တဲ့ ရောဂါ၊
- Western equine encephalitis ခြင်ကတဆင့်ကူးစက်တဲ့ ဦးဏှောက်ရောင်ရောဂါ၊
- Yellow fever ခြင်ကတဆင့်ကူးစက်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် အဖျားရောဂါတမျိုး၊
တခြားကျန်းမာရေးအန္တရာယ်တွေလည်းသတိထားရမယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာကနေ မေးခိုင်ပိုးဝင်ခြင်း၊ ကိုယ်အပူချိန်နည်းခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပြတ်တောက်ရာကနေ ရေသန့်စင်မပေးနိုင်ခြင်း၊ ဆေး-ကာကွယ်ဆေး ထားသိုမှုကို ထိခိုက်စေခြင်း၊ ကုသမှုကို ထိခိုက်စေခြင်း၊ အစားအစာ ထားသိုမှု၊ ချက်ပြုတ်မှုကို ထိခိုက်ခြင်း။ အညစ်ကြေးစွန့်စနစ်ကို ထိခိုက်ခြင်း။
မြစ်တွေဘေးမှာနေကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ ရေကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါတွေကင်းကြပါစေ။
Dr. Tint Swe's Writings ဘလော့မှာလာဖတ်သူ တသန်းပြည့်...
Neem Leaves တမာရွက်
ဗူး နဲ့ ဘူး
ဗူးပင် နဲ့ ဘူးပင်
Water everywhere ရေကြီးတဲ့နှစ်
Chindwin River ချင်းတွင်းမြစ်
Cheer or Fear လက်ညှိုးများ
Zika vaccine ဇီကာ ကာကွယ်ဆေး အမေး
HIV-AIDS နှင့် ကလေးနို့တိုက်ခြင်း
နှုတ်ခမ်းကွဲကို ပြင်နေပြီ၊ အာခေါင်ကွဲကို ပြင်ရအုံးမယ်
Fragile Empire ပြိုကွဲနိုင်ခြေရှိတဲ့ အင်ပါယာ
The carpet on head ခင်းနှီးခြုံ လုံပါပေ့
Insecurity အစိုးရပြောင်းပေမယ့် အစိုးမရတွေကမပြောင်း
Ex-Myanmar citizen ခံဝန်ချက် နဲ့ အသနားခံစာ
Achilles heel ထရွိုင်မြို့ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ခြင်း
Saggaing စစ်ကိုင်းတံတားဖက်ဆီကို့့
Flooding and communicable diseases ရေကြီးခြင်းနဲ့ ...
Tabloid Media တက်ဘလွိုက်
Prime Suspect တစ်တရားခံ
A group of ducks ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းက တစ်တရားခံမဟုတ်
Mandalay Bombarded မန္တလေးမြို့လယ်မှာ ဗုံးကြဲခြင်း
Gone wild ရာဇဝင်ရိုင်း
လူထုဦးလှနဲ့ ရွှေကိုင်းသား မှားသလား
Mr. Fat man
Completely abandoning the luxurious existence
My prayers ဂိဇ္စုကုဋ်တောင်
NCGUB 10th anniversary
Zomi Women Union (ZWU) 10th Anniversary was celebr...
HPV vaccine news သားအိမ်ဝ (ခေါင်း) ကင်ဆာကာကွယ်ဆေး ...
MI magazine မြက်ခင်းပုပ်
First Lady ရမည်းသင်းသူ
Own Slips အရပ်ဆေးနည်းနဲ့ ရေးနည်းအမှားကြော်ငြာများ
Not Smile အာဏာမှာ ပါဝါရှိတယ်
Wealth is made out of Health ကျန်းမာရေးနဲ့ ချမ်းသာရေး
The true Master ချွတ်ထိုက်သူ
Officer Vs Soldier ဗိုလ်တထောင် တပ်သားတယောက်
US Election ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ
Amor အရေးပေါ် မယဉ်ကျေးမှု
မတ်လ တော်လှန်ရေး (ဒဂုံတာရာ)
Scalpel and writing pen ဒါး နဲ့ ဓါး
Mandalay Centennial မန္တလေးမြို့တည်နန်းတည် အနှစ်တရာ...
Mandalay အုတ်ကျစ်ကျော်အေး မန္တလေး
First cousin ဘာ့ကြောင့် လင်မယားတဝမ်းကွဲ မရှိသလဲ
Old Coins ဒင်္ဂါးပြား
The Rangoon Daily 1947
Pictures on Kyat ကျပ်ငွေပေါ်ကပုံများသမိုင်း
တဒက်ဒက် တဒိုင်းဒိုင်း သတ်ပုံ
Rebuilding task ဖျက်အစဉ် ပြင်ခဏ
Performance Art အတုပညာ
Giant-cell tumor of the bone (GCTOB) ကင်ဆာနဲ့တူတဲ့...
Hepatitis C အသည်းရောင် (စီ) နောက်ဆုံး အပ်ဒိတ်
Operation theatre ခမ်းနားသော ခွဲစိတ်ခန်း
Single Version ဗားရှင်း
A Rolling Stone ရေညှိကပ်နေတဲ့ ကျောက်တုံး
Thirty years more နောက်ထပ် အနှစ်သုံးဆယ်
The Provocative Book ဆရာတော်သျှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဗိုလ်ချုပ်ေ...
Lotus temple ကြာဗိမာန်နားက မဟာသတိပဋ္ဌာန်ကုန်း
Bahá'í Faith ဘဟိုင်းယီး ယုံကြည်ရာဘာသာ
Window shopping ဂျင်းဘောင်းဘီ အရေးအသား (၃)
Busted Ripped Knee Jean ဂျင်းဘောင်းဘီ အရေးအသား (၂)
IMM Friends ဆေးမန်း သူငယ်ချင်းများ
BBC, VOA, RFA ဘီဘီစီ-ဗွီအိုအေ-အာရ်အက်ဖ်အေ